Shabaab Miino Aasayay oo la qabtay | Keydmedia
Shabaab Miino Aasayay oo la qabtay
Buula-mareer(KON)-Ciidamada AMISOM ee ku sugan Magaalada Buula-mareer ayaa shaaca ka dhigay in ay gacanta ku dhigeen Horjooge ka tirsan Maleeshiyada Al-shabaab oo xiliga la qabtay ku Howlanaa in uu maleego Fal Argagixiso.
Wararka ayaa sheegaya in Bartamaha Magaalada Buula-mareer gaar ahaan meel u dhaw Xarunta Degmada oo Fariisin ay ku leeyihiin Ciidamada AMISOM lagu qabtay Horjooge ka tirsan Al-shabaab Xili Xalay uu halkaasi ku Aasayay Miinada Dhulka lagu Aaso.
Burhaan C/risaaq oo ka mid ah Dadka ku nool Magaalada Buula-mareer ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa Keydmdia online u sheegay in Ciidamadda AMISOM ay qabteen Shaqsigaasi ka tirsan Shabaab oo Miino dhigayay.
Magaalada Buula-mareer ayaa Shalay Ciidamada AMISOM waxaa ay ka sameeyeen Howlgallo miino baaris ah,kuwaas oo Waxyaabaha Qarxa gacanta ku dhigay.
Gobolka Shabellaha Hoose ayaa Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowaladda Soomaaliya waxaa ay ka wadaan Howlgal ka dhan ah Maleeshiyada Al-shabaab.